Uma uzizwa ukhathala njalo, ukuphazamiseka, futhi unesilonda emlonyeni wakho - ungase ugule nge-anemia, noma i-anemia. Lesi yisifo esizimele esithinta ukungena kwe-vitamin B12, okudingekayo ekwakheni amangqamuzana egazi amasha. Ungathola i-B12 eyanele ekudleni kwakho, kodwa umzimba wakho ngeke ukwazi ukuwugaya. Ngakho-ke, i-anemia noma i-vitamin B12 ukuntuleka - kuyini ingozi? Futhi yisiphi isizathu? Ake sibone ...?
Ukubhekisela kwakho: yiliphi igazi?
Igazi liqukethe uketshezi olubizwa nge-plasma, eliqukethe:
Amaseli aphuzi egazi - athatha i-oxygen kuwo wonke umzimba.
Amangqamuzana egazi elimhlophe - ayingxenye yesimiso sokuzivikela komzimba futhi avikela umzimba ekutheleleni.
Ama-platelets - okusiza ukuvala igazi.
Amaprotheni namanye amakhemikhali anemisebenzi ehlukile.
Ukunikezwa kwamaseli amasha wegazi obomvu njalo kudingekile ukufaka esikhundleni samaseli endala afa. I-erythrocytes iqukethe into ebizwa ngokuthi i-hemoglobin. I-hémoglobin ibophezela oksijini futhi idlulisele oksijini emaphashini kuzo zonke izingxenye zomzimba.
Ukuvuselelwa kwamangqamuzana aphindaphindiwe egazi kanye namazinga ajwayelekile we-hemoglobin adingekayo empilweni yengqondo kanye nomnkantsha wamathambo. Ngenxa yalokhu, umzimba kufanele wamukele ezakhiweni ezanele zokondla, njenge-iron namavithamini, kuhlanganise ne-vitamin B12.
Yini i-anemia noma i-vitamin B12 yokuntuleka?
unamaseli egazi abomvu ambalwa kunejwayelekile, noma
unaphansi kokudinga i-hemoglobin kuzo zonke izilonda zegazi elibomvu.
Kunezimbangela ezihlukahlukene ze-anemia (njengokuntuleka kwensimbi namavithamini athile). I-Vitamin B12 ibalulekile empilweni. Kubalulekile ukuvuselelwa kwamangqamuzana emzimbeni, njengama-red cells, abulawa nsuku zonke. I-Vitamin B12 itholakala enyameni, enhlanzi, emaqanda nasebisi - kodwa hhayi ezitsheni noma emifino. Ukudla okunokulinganisela okujwayelekile kuqukethe inani elanele levithamini B12. Ukuntuleka kwevithamini B12 kuholela ekudleni kwegazi, futhi ngezinye izikhathi kwezinye izinkinga.
Ziyini izimpawu zokuntula i-anemia noma i-vitamin B 12?
Izinkinga ngokuphathelene ne-anemia zibangelwa ukunciphisa inani le-oksijini emzimbeni.
Izimpawu ezivamile zihlanganisa: ukukhathala, ukunganakwa, ukuzwa ubuthakathaka, ukukhathazeka ukuphefumula.
Izimpawu ezingavamile ezifaka phakathi zihlanganisa: ikhanda, izintambo, izinguquko zokunambitha nokukhala ezindlebeni.
Uma ungenayo i-vitamin B12, ezinye izingxenye zomzimba zingathinteka. Ezinye izimpawu ezingase zenzeke zibandakanya ubuhlungu bomlomo nobubele belimi. Uma lokhu kungelashwa, izinzwa zingase zithuthuke. Isibonelo: ukudideka, ukunganaki nokungazinzi. Kodwa lokhu kuyi-rarity. Ngokuvamile i-anemia iyatholakala ngaphambi kwesikhathi, futhi iphathwa ngempumelelo ngaphambi kokuvela kwezinkinga ezivela ohlelweni lwezinzwa.
Izimbangela ze-anemia noma i-vitamin B12.
Ukuphelelwa kwesifo esingapheliyo.
Lesi yisifo esizimele. Amasosha omzimba ngokuvamile akhiqiza izifo zokuzivikela ukuze avikele amabhaktheriya namagciwane. Uma unezifo ezizimele, isimiso somzimba samasosha omzimba asikhiqizi i-antibody. Iyini ingozi? Ukuthi ama-antibodies akhiwa ngokumelene nezitho zangaphakathi zakho noma ngokumelene namaseli omzimba wakho. Ngakho-ke, i-vitamin B12 ayikwazi ukufakwa. I-anemia engapheli ngokuvamile iqala eminyakeni engaphezu kwengu-50. Abesifazane bayangena kaningi kunamadoda, futhi ngokuvamile bafa. Lesi sifo sikhula kakhulu kubantu abanezinye izifo ezizimele, ezifana nesifo segciwane ne-vitiligo. Ama-antibodies enza i-anemia angatholakala ngokuhlolwa kwegazi ukuqinisekisa ukuxilongwa.
Izinkinga ngesisu noma emathunjini.
Imisebenzi yangaphambilini esiswini noma izingxenye ezithile zamathumbu kungase ihlanganise iqiniso lokuthi ukungena kwe-vitamin B12 ngeke kwenzeke. Ezinye izifo zegciwane zingathinta ukumunwa kwe-vitamin B12. Isibonelo, isifo sikaCrohn.
Ukuntuleka kwevithamini B12 kuyisimo esingenasidingo uma udla ukudla okuvamile. Kodwa ngokudla konke kuhlukile. Izitshalo ezidliwayo ezingadli izilwane noma imikhiqizo yobisi zingafaka isandla ekungeneni kwe-vitamin B12.
Ukwelashwa kwe-anemia noma ukutholakala kwe-vitamin B12.
Uzodinga umjovo we-vitamin B12. Ngama-injection ayisithupha kanye emva kwezinsuku ezingu-2-4. Lokhu ngokushesha kugcwalisa okuqukethwe kwe-vitamin B12 emzimbeni. I-Vitamin B12 iqoqa esibindi. Lapho izithako zikavithamini B12 sezigcwaliswa, zingakwazi ukwanelisa izidingo zomzimba izinyanga ezimbalwa. Ukujola kuyadingeka kanye kuphela ezinyangeni ezintathu. Ukujola kuyadingeka empilweni. Ngeke ube nemiphumela emibi evela ekwelapheni. Yilokho okudingayo.
Ngokuvamile i-anemia ihlaziya emva kokuqala kokwelashwa. Ungacelwa ukuba uthathe ukuhlolwa kwegazi njalo ngonyaka noma kunjalo. Ukuhlolwa kwegazi kungenziwa ukuze ubone ukuthi igciwane lakho le-thyroid lisebenza kahle. Isifo se-thyroid sivame kakhulu kubantu abane-anemia engapheli.
Uma une-anemia, unethuba elikhulayo lokuthuthukisa umdlavuza wesisu. Lokhu kusho ukuthi abantu abangaba ngu-4 kwabangu-100 abane-anemia engapheli bakhula umdlavuza wesisu (ngisho nalapho belapha i-anemia). Uma ubhekene nezinkinga zesisu, njenge-indigestion ejwayelekile noma ubuhlungu - funa iseluleko sezokwelapha ngokushesha.
Izizathu eziyishumi zokukhathala kwakho njalo
Ukungabi namavithamini: ukuxilonga nokuqeda
Inyanga yesithathu yokuphila kwengane
Ihlamu elimnandi lemon
Isifo se-bronchoectatic: ukwelashwa kwemithi yabantu
Indlela yokufundisa ingane yakho ukuba ihlanzeke
Uphaya ngekhanda kakhukhunathi 2
U-Alla Pugacheva utshele ukuthi amawele akhe abukeka kanjani
Ubulili ngosuku lokuqala: kanjani ukulahla umuntu, ukuze ungabhubhisi ubuhlobo